बढ्दो आत्महत्या र ऐनका कुरा – Chitwan Post
बढ्दो आत्महत्या र ऐनका कुरा
आत्महत्या विश्वव्यापी समस्या बनिसकेको छ । आत्महत्या गर्नेमा नेपाल सातौँ स्थानमा छ । नेपालमा बर्सेनि पाँच हजारभन्दा बढीले आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिन्छ । आत्महत्या आफैँमा एउटा अपराध हो । आफ्नो ज्यान आफैँले लिने मनसायले जानीजानी आफैँलाई मार्नु आत्महत्या हो । अहिले पत्रकार शालिकराम मृत्यु प्रकरणपश्चात् रवि लामिछानेलगायतलाई पक्राउ गरी ‘आत्महत्या दुरूत्साहन’मा मुद्दा चलाइएपछि यो पदावली अत्यन्तै चर्चामा छ । मुलुकी ऐन २०२० लागू भएका बखत यो पदावलीप्रति कुनै चासो थिएन । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०७४ भदौ १ मा जारी भएको मुलुकी संहिताको ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्यालाई कसुरका रुपमा लिइएको छ । अहिले दुरूत्साहन अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन सिलसिला अगाडि बढेपछि यसमा बढी चासो र बहस हुन थालेको छ । व्यक्तिका कुनै पनि कार्य कसुर वा अपराध मानिने आधार भनेको फौजदारी कानुनले व्याख्या गरेभन्दा उल्टो कार्य गरिनु हो । कसैलाई आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन गर्नु वा दबाबमा परेर उम्कन नपाएको अवस्थालाई ‘आत्महत्या दुरूत्साहन’ भएको मानिन्छ, जसका लागि आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरूत्साहन र मतियारी गरेको हुनुपर्छ । अपराध संहिताको दफा ३५ ले कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरूत्साहन गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा दुरूत्साहन गरेको मानिन्छ ।
पत्रकार शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा आरोपितहरुलाई आत्महत्या दुरूत्साहनअन्तर्गत नै मुद्दा चलाइएको छ । तीनैजनाको बयान सकिएको छ । थुनछेकको बहसपश्चात् सम्मानित अदालतबाट आदेश के आउँछ भन्ने नै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । चितवनको यो प्रकरणबाट आमजनतालाई त्रास उत्पन्न भएको छ । आत्महत्या दुरूत्साहन प्रमाणित भएको खण्डमा पाँच वर्षको कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान राखिएकाले यो ऐन परिमार्जन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । यस प्रावधानले जोसुकैले जोकसैलाई फसाउने वा दुःख दिने मनसायले भिडियो सन्देश, अडियो रेकर्ड, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस वा सन्देश, चिट्ठी वा सुसाइट नोट लेखेर यसले दुरूत्साहन गरेका कारण म आत्महत्या गर्न बाध्य भएँ भन्दैमा ‘आत्महत्या दुरूत्साहन’ हुने कि नहुने ? भोलि सरकार प्रमुख या उच्चपदस्थ नेताका नाममा तिनका कार्यकर्ता वा जनताले मर्नुअघि यस्तै सन्देश छाडेर कसैले आत्महत्या ग¥यो भने सो दफा आकर्षित हुने कि नहुने ? कसैको पद, प्रतिष्ठा र सामाजिक व्यक्तित्व धूलीसात बनाउन कायरहरुले आत्महत्या रोजेर र नाम पोलेको खण्डमा निरपराधीहरुले अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ ।
विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार कुनै कार्यको पूर्णताबाट मात्र अपराध बन्छ । अपूर्ण रहे अपराध पनि अपूर्ण नै रहन्छ । यसमा सजाय पनि फरक–फरक हुन्छ । अपराध हुनका लागि षड्यन्त्र, उद्योग, दुरूत्साहन र मतियारी हुनुपर्छ । आत्महत्या कसैको दुरूत्साहनका कारण हुनै सक्दैन । आत्महत्या स्वेच्छिक मनसायबाट उत्पन्न हुने कुरा हो । अरुको उक्साहटमा यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले, अपराध संहिताको दफा १८५ को आत्महत्याका लागि दुरूत्साहन गर्न नहुने भन्ने प्रावधान नै संशोधन गरिनुपर्छ । किनभने, अपराध संहिताले के–के गरेमा आत्महत्या गर्न उक्साएको मानिन्छ ? भन्ने विषयमा कुनै व्याख्या गरेको वा प्रावधान राखेको पाइँदैन । आत्महत्या गर्नका लागि एक्लो व्यक्तिको मात्रै संलग्नता रहेको हुन्छ । व्यक्तिको मानसिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने कार्यमा कसैको दबाबका भरमा कसैले आत्महत्या गर्नै सक्दैन । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको हकमा आपराधिक दुरूत्साहनले कुनै प्रभाव पनि पार्दैन । त्यसैले, अपराध संहिताको दफा १८५ लहडका भरमा परामर्शविना राखिएको प्रस्ट हुन्छ । हामीले बूढी मरी भन्ने पीरभन्दा पनि काल पल्क्यो भने त्यसले पार्ने प्रभावबारे बढी चिन्ता लिनु आवश्यक देखिएको छ ।